Durex Fetherlite Ultima Condom - 3pcs*12packs 52MM
မူလဈေးနှုန်း Ks 54,000
ဈေးနှုန်း Ks 49,000
Durex is the world's No.1 brand for condoms. From ribbed and dotted to our slightly thicker, Extra Safe condoms, discover our expertly designed range of condoms created to enhance your sexual experience.
Napattiga U ပုံရှိခရီးသွားခေါင်းအုံး
မူလဈေးနှုန်း Ks 69,000
ဈေးနှုန်း Ks 64,500
ခရီးသွားရာတွင် အသုံးပြုရန်အလွန်သင့်လျော်သော U ပုံရှိခေါင်းအုံးလေးပဲဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ခရီးသွားရင်း အိပ်ပျော်ရာတွင် လည်ပင်းနာခြင်းများဖြစ်ပေါ်မည်မဟုတ်ပဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အနားယူနိုင်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်လိုရာခရီးကို စိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့သွားရောက်နိုင်မှာပါ။လူငယ်လူရွယ်များနှင့်လူကြီးများအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
粉紅色 黃色 灰色
Napattiga Adult Pillow
မူလဈေးနှုန်း Ks 89,000
ဈေးနှုန်း Ks 86,000
ဤခေါင်းအုံးသည်ကျန်းမာရေးခေါင်းအုံးဖြစ်သောကြောင့် ညအိပ်ယာဝင်ရာတွင် ယင်းခေါင်းအုံးကြောင့်အိပ်မပျော်ရခြင်းများဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါ။ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းပြီး အသုံးပြုရာတွင် ကျေနပ်မှုများရရှိစေမှာပါ။ ရှိလေ့ရှိထရှိသော ခေါင်းအုံးပေါ်တွင်ရှိသောပိုးမွှားကိုလည်းလျော့ကျစေပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောခေါင်းအုံးဖြစ်ပါသည်။ လူငယ်လူရွယ်များနှင့်လူကြီးများအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
ဤခေါင်းအုံးသည်ကျန်းမာရေးခေါင်းအုံးဖြစ်သောကြောင့် ညအိပ်ယာဝင်ရာတွင် ယင်းခေါင်းအုံးကြောင့်အိပ်မပျော်ရခြင်းများဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါ။ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းပြီး အသုံးပြုရာတွင် ကျေနပ်မှုများရရှိစေမှာပါ။ ရှိလေ့ရှိထရှိသော ခေါင်းအုံးပေါ်တွင်ရှိသောပိုးမွှားကိုလည်းလျော့ကျစေပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောခေါင်းအုံးဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုများလည်းလျော့ကျစေနိုင်ပါသည်။ လူငယ်လူရွယ်နှင့်လူကြီးများအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
ဤခေါင်းအုံးသည်ကျန်းမာရေးခေါင်းအုံးဖြစ်သောကြောင့် ညအိပ်ယာဝင်ရာတွင် ယင်းခေါင်းအုံးကြောင့်အိပ်မပျော်ရခြင်းများဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါ။ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းပြီး အသုံးပြုရာတွင် ကျေနပ်မှုများရရှိစေမှာပါ။ ရှိလေ့ရှိထရှိသော ခေါင်းအုံးပေါ်တွင်ရှိသောပိုးမွှားကိုလည်းလျော့ကျစေပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောခေါင်းအုံးဖြစ်ပါသည်။ ကျောနာ၊ ပခုံးနာများကိုလျော့ကျစေပါသည်။ လူကြီးများအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
Napattiga ကျောနာ၊ ပုခုံးနာများကိုလျော့ကျစေသောနှစ်ထပ်ခေါင်းအုံး
ဤခေါင်းအုံးသည်ကျန်းမာရေးခေါင်းအုံးဖြစ်သောကြောင့် ညအိပ်ယာဝင်ရာတွင် ယင်းခေါင်းအုံးကြောင့်အိပ်မပျော်ရခြင်းများဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါ။ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းပြီး အသုံးပြုရာတွင် ကျေနပ်မှုများရရှိစေမှာပါ။ ရှိလေ့ရှိထရှိသော ခေါင်းအုံးပေါ်တွင်ရှိသောပိုးမွှားကိုလည်းလျော့ကျစေပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောခေါင်းအုံးဖြစ်ပါသည်။ အကျောများနာခြင်းများကိုလည်းလျော့ကျစေပါသည်။ လူကြီးများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
Napattiga Contour Pillow For Older People
မူလဈေးနှုန်း Ks 58,000
ဤခေါင်းအုံးသည်ကျန်းမာရေးခေါင်းအုံးဖြစ်သောကြောင့် ညအိပ်ယာဝင်ရာတွင် ယင်းခေါင်းအုံးကြောင့်အိပ်မပျော်ရခြင်းများဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါ။ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းပြီး အသုံးပြုရာတွင် ကျေနပ်မှုများရရှိစေမှာပါ။ ရှိလေ့ရှိထရှိသော ခေါင်းအုံးပေါ်တွင်ရှိသောပိုးမွှားကိုလည်းလျော့ကျစေပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောခေါင်းအုံးဖြစ်ပါသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
Napattiga Adult Contour Pillow
ဤခေါင်းအုံးသည်ကျန်းမာရေးခေါင်းအုံးဖြစ်သောကြောင့် ညအိပ်ယာဝင်ရာတွင် ယင်းခေါင်းအုံးကြောင့်အိပ်မပျော်ရခြင်းများဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါ။ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းပြီး အသုံးပြုရာတွင် ကျေနပ်မှုများရရှိစေမှာပါ။ ရှိလေ့ရှိထရှိသော ခေါင်းအုံးပေါ်တွင်ရှိသောပိုးမွှားကိုလည်းလျော့ကျစေပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောခေါင်းအုံးဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးများအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
ဤခေါင်းအုံးသည်ကျန်းမာရေးခေါင်းအုံးဖြစ်သောကြောင့် ညအိပ်ယာဝင်ရာတွင် ယင်းခေါင်းအုံးကြောင့်အိပ်မပျော်ရခြင်းများဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါ။ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းပြီး အသုံးပြုရာတွင် ကျေနပ်မှုများရရှိစေမှာပါ။ ရှိလေ့ရှိထရှိသော ခေါင်းအုံးပေါ်တွင်ရှိသောပိုးမွှားကိုလည်းလျော့ကျစေပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောခေါင်းအုံးဖြစ်ပါသည်။ လူငယ်လူရွယ်နှင့်လူကြီးများအတွက်သာဖြစ်သည်။
ဈေးနှုန်း Ks 84,000
Durex Fetherlite Ultima Condom - 3pcs*3packs 52MM
ဈေးနှုန်း Ks 12,100
Durex Kingtex Condom - 12pcs×1packs 49mm
မူလဈေးနှုန်း Ks 8,200
Durex Kingtex Condom 12pcs*1packs 52.5MM
Durex Fetherlite Condom - 3pcs*12packs 52.5MM
Durex Fetherlite Condom - 3pcs*3packs 52.5MM
မူလဈေးနှုန်း Ks 11,200
ဈေးနှုန်း Ks 9,600
Durex Excita Condom - 3pcs*12packs 53MM
မူလဈေးနှုန်း Ks 39,900
ဈေးနှုန်း Ks 29,200
Durex Excita Condom - 3pcs*3packs 53MM
မူလဈေးနှုန်း Ks 13,860
Durex Comfort Condom - 3pcs*12packs 52MM
ဈေးနှုန်း Ks 54,000
Durex Comfort Condom - 3pcs*3packs 52MM
မူလဈေးနှုန်း Ks 13,800
ဈေးနှုန်း Ks 12,200
Durex Strawberry Condom - 12pcs*1packs 52.5MM
မူလဈေးနှုန်း Ks 14,700
ဈေးနှုန်း Ks 13,300
Durex Strawberry Condom - 3pcs*12packs 52.5MM
ဈေးနှုန်း Ks 39,900
Durex Strawberry Condom - 3pcs*3packs 52.5MM
မူလဈေးနှုန်း Ks 12,600
Durex Performa Condom - 3pcs× 12packs 52.5mm
မူလဈေးနှုန်း Ks 50,500
Durex Performa Condom - 3pcs× 3packs 52.5mm
Durex ကွန်ဒုံး။ Durex is the world's No.1 brand for condoms. From ribbed and dotted to our slightly thicker, Extra Safe condoms, discover our expertly designed range of condoms created to enhance your sexual experience.
Clear,non-greasy and water soluble. Suitable for use with latex condoms. ကွန်ဒုံးအသုံးပြုရာတွင် အသုံးပြုသောချောဆီ။
စာမျက်နှာ 12ဒေတာအချက်အလက်များ52